नेपालका ओली र अमेरिकाका ट्रम्पको 'कुर्सी मोह' उस्तै !
रूपा खड्का बिहीबार, पौष २३ २०७७
अहिले नेपालमा र अमेरिकामा शक्ति हस्तान्तरणको उस्तै परिदृश्य देखिएको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुर्सी छाड्न नसकेर संसद् नै विघटन गरिदिए । उता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि निर्वाचनमा हार स्वीकार गर्न नसकेर सत्ता आफ्नो हातमा लिन अनेक हर्कत गर्दै छन् ।
काठमाडौं । केहीदिन अघि सम्म नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाले मिडिया तातेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछिको उतावचढाव मिडियाको लागि 'हट केक' बनेका थिए । बुधबार साँझ देखि भने नेपाल लगाएत विश्वकै मिडियाको लागि नयाँ कन्टेन्ट आएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकले गरेको हिंस्रक प्रदर्शन र त्यसपछिका गतिविधि ।
दुई देशमा परिवेश फरक भएपनि सन्दर्भ समान देखिएका छन् । समानता हाे 'कुर्सीको लडाई' ।
बुधबार संसदमा इलेक्ट्रोल मत सार्वजानिक गरी जो बाइडनको जित सुनिश्चित गराउन बहस चलिरहेका बेला ट्रम्पले आफ्नो अन्तिम प्रयास गरेका छन् । लगभग 'कु' शैली मा आफ्ना समर्थकलाई हिंसात्मक विद्रोह गर्न ट्रम्पले उक्साएका छन् । त्यो पनि देशकै राजधानी वासिंगटनमा रहेको क्यापिटल भवन अघि भएको प्रदर्शन यति हिंस्रक भयो कि चार जनाको ज्यान गयो । त्यतिमात्र होइन संसद भित्रै प्रदर्शनकारी पुगेपछि चलिरहेका इलेक्ट्रोल मतमाथीको बहस समेत रोकेर उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र सभामुख न्यान्सी पेलेसीलाइ सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो ।
अहिले त्यहाँ कफ्र्यु लगाइएको छ भने वाशिंटनमा १५ दिनको लागि आपतकाल घोषणा गरिएको छ । ट्रम्प सत्ताबाट बाहिरिन अब मात्र १३ दिन बाँकी छ । उनलाई शक्ति गुमाउनुको पीडा समग्र अमेरिकाले भोगिरहेका छन् जसरी नेपालका ओलीले गरेको असंबैधानिक निर्णयले सम्पूर्ण देशकै अवस्था अस्थिर बनेको छ भने हरेक नेपालीको टाउकोमा नयाँ आर्थिक भारको बोझ थपिएको छ । संबिधानमाथी नै कू गरेका छन् ।
'म नै राज्य हुँ' भन्ने भ्रमबाट ट्रम्प र ओली दुबै ग्रसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाउँछ । अमेरिका जस्तो संसार कै ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि शक्ति हस्तान्तरणमा यति सकस भइरहेको छ । उता लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिहेको नेपालमा पनि ओली प्रवृति उस्तै अलोकतान्त्रि बनिरहेको छ । आखिर 'कुर्सी मोह' दुबैको उस्तै उस्तै छ ।
अस्थिर प्रम ओलीले देशकै राजनिति अस्थिर बनाए
डा. रवीन्द्र पाण्डे १ महिना अगाडी
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउन नदिन के गर्ने ?